Exfoliation - Ny lakilen'ny volonao hitombo haingana | Bezzia
Ny fitrandrahana no lakile hampitomboana haingana ny volonao
Tsy vao sambany isika te hahita ny fomba hitomboan'ny volontsika haingana. Eny, azo antoka fa efa somary sasatry ny mitady vahaolana isan-karazany ianao amin'izany. Androany dia ho hitantsika ny iray amin'ny fahita indrindra, izay ananantsika eo an-tanan'ny rantsan-tanantsika fa angamba tsy omentsika azy matetika ny lanjan'izany: fanodinana exfoliation.
Satria toy ny mitranga amin'ny sisa amin'ny vatana, ny fanovana dia dingana iray izay hanatsara ny hodintsika tokoa. Izany dia noho izany raha mieritreritra ny volo isika, na ny hodi-doha, dia tsy ho tavela any aoriana. Te hahafantatra ireo dingana tokony harahinao ve ianao?
1 Fa maninona ny exfoliation no lakilen'ny fitomboan'ny volo haingana?
2 Esory amin'ny kafe ny hodi-doha
3 Sugar sy menaka oliva ho an'ny volonao
4 Sugar sy voasarimakirana
Fa maninona ny exfoliation no lakilen'ny fitomboan'ny volo haingana?
Araka ny fantatsika tsara, exfoliate dia manao veloma ny sela maty. Noho izany, rehefa ataontsika amin'ny hoditra izany dia hesorintsika daholo ny fihoaram-pefy, mba hanomezana toerana ho an'ny fanatsarana. Amin'ity tranga ity dia zavatra toa izany no mitranga satria ny hataontsika dia manafotra ny hodi-dohantsika izay mila izany hatrany. Izy io dia faritra iray izay mazàna manangona tavy amin'ny tranga maro, fa ny any kosa kosa maina. Miaraka amin'ny exfoliation tsara dia hanampy ny hoditra amin'ity faritra ity isika, hanao veloma ny residu vokatra sasany izay mijanona ao anaty volo indraindray ary mampihetsi-po mamindra ka ny volo manomboka mihamatanjaka noho ny hatramin'izay. Azonao jerena izany rehetra izany noho ny fampiharana fanafody voajanahary narosonay.
Esory amin'ny kafe ny hodi-doha
Ny vovo-kafe dia iray amin'ireo fanafody ampiasaina indrindra rehefa te-hanadio isika. Ho fanampin'izay, dia singa iray ananantsika rehetra ao an-trano azo antoka. Noho izany, mila kafe 4 sotro fihinanana isika hanombohana ny fanamboarana ny fangaro. Saingy mba ho feno kokoa ny fanorana ary mora kokoa ho antsika aza, tsy misy toa izany Afangaroy ny kafe amin'ny yaourt voajanahary roa sotro fihinanana na raha tsy manana ianao dia menaka voanio kely. Ka izany dia manampy antsika bebe kokoa rehefa manao fanorana. Hatao amin'ny rantsan-tànana izany, nefa tsy maneritery be loatra sy manarona tsara ny faritra iray manontolo.
Sugar sy menaka oliva ho an'ny volonao
Safidy iray hafa hanaovana exfoliation dia ny manampy antsika amin'ny siramamy. Ny graniteo dia hamela anay vokatra tsara hodinihina ihany koa. Fa marina fa tsy maintsy atambarintsika amin'ny zavatra hafa foana izy io, mba hitsoraka tsara kokoa amin'ny hoditra. Amin'ity tranga ity, dia ny diloilo oliva. Araka ny fantatsika tsara, ity dia tompon'andraikitra amin'ny fanomezana hydration, ankoatry ny fanafoanana ireo karazana fako rehetra ary manome antsika antioksida. Ity dia hevitra iray hafa izay tianay ho tsotra amin'ny fanatanterahana azy ary ho an'ny valiny lehibe.
Sugar sy voasarimakirana
Ity fanafody ity dia mety indrindra amin'ireo olona manana hoditra volon-menaka. Satria araka ny fantantsika ny voasarimakirana dia ho tompon'andraikitra amin'ny fifehezana ny sebum. Ka miaraka aminy, ho tonga ny siramamy, izay ho tompon'andraikitra amin'ny fitarihana ny loto rehetra ananantsika. Ho an'ny fanafody toy izao, tsy misy zavatra mitovy amin'ny fananana singa iray amin'ny iray hafa. Tadidio koa fa ny voasarimakirana amin'ny volonao, raha mahazo ny masoandro ianao dia afaka manamaivana azy. Ka ireo karazan-kevitra ireo dia matetika no tsara indrindra atao amin'ny alina rehefa tsy mivoaka intsony isika. Tokony ho somary mando ny volonao rehefa mampihatra azy ianao. Manomboka eto dia hanomboka amin'ny fanorana boribory ianao ary afaka minitra vitsy dia afaka manasa ny volonao toy ny mahazatra ianao. Azo antoka fa ho hitanao ny vokany haingana!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Ny fitrandrahana no lakile hampitomboana haingana ny volonao
Tanàna 5 any Frantsa tianao hipetrahana